လက်တော့ တစ်လုံးကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းမယ် ? | မောင်မင်းသား
Home » ဖုန်းနည်းပညာ , အတိုအစ နည်းပညာများ » လက်တော့ တစ်လုံးကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းမယ် ?
လူတွေ ရေချိုးသလိုပဲ လက်တော့တွေလည်း ရေရှည်ထားခံဖို့အတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အရင်တစ်ခါ ဘယ်အချိန်လောက်က သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားခဲ့ပါသေးသလဲ? တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးတာလည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပစ္စည်းကိုယ်လပ်တော့ လေး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ ရေရှည်သုံးနိင်ဖို့ အတွက် သန့်ရှင်းရေးလေး လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ လပ်တော့ပ်ဟာ သံချေးတွေ၊ ဖုန်တွေနဲ့ အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဓိက က အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပန်ကာပေါ့။ သုံးနေတဲ့အတော့အတွင်း ဖုန်တွေနဲ့ကြေးတွေနဲ့ စက်အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိင်ပါတယ်။ အဲဒီအပူလွန်တာက ကိုယ်စက်ကို ကိုယ်ပြန်ပြီး ဖျက်ဆီးနေသလိုပါပဲ။
Posted by mg minthar at 10:38 PM
Labels: ဖုန်းနည်းပညာ, အတိုအစ နည်းပညာများ